Écrit par Administrator | |
Tantara marina niseho tato ho ato : Miparitaka amin’ny aterineto.
Tao amin’ny Hopitaly iray tany Itaguai any Rio de Janeïro, Brésil, ny faran’ny herinandro (tsy voafaritra ny daty), dia nisy zazavavy kely nateraky ny renim-pianakaviana iray. Niraikitra ny tanany roa raha teo am-piterahana azy ny reniny.
Nilaza tamin’ireo ray aman-dreniny ny mpitsabo fa ataontsika izay hampihetsika ny tànany, koa nasiana antistatique ity zaza menavava ary avy eo dia natao ny fandidiana ireto tànana kely roa miraikitra ireto.
Vita soa aman-tsara ny fandidiana ary toa nisy karazana hoditra manify niraikitra teo.
Nosokafana ireto tànana roa ; tsy ho azonao an-tsaina ny zavatra nofonosin’ireto tànana kely roa ireto … fa nahitana soratra mazava tsara hoe : « Ho avy Jesosy », « Jesus revient », « Jesus is coming ».
Nanomboka nitomany ireo mpitsabo raha nahita izany ka niaiky ny fahotany, nibebaka, ary ireo ray aman-dreniny sy ny olona rehetra tao amin’ny hopitaly koa.
Niparitaka tao amin’ny tànanan’i Itaguai ny vaovao ka nisy famangiana nataon’ny Fanahy Masina : maro ny olona tsy mpiditra am-piangonana intsony no niverina ka niaiky ny otany sy nandray an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy, fa ho avy Jesosy.
Nalefan’i Jesosy io zazakely io hitondra izany hafatra izany !
Andro vitsivitsy taorian’izany dia maty io zazakely io !
Izao no hafatra : « HO AVY JESOSY », mibebaha, minoa ny filazantsara, mialà amin’ny ratsy, raiso Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy anao.